[Ukara] Wondershare PPT2DVD Pro: PPT ka DVD Ntụgharị
Inwe ike ịkọrọ anụ ahụ mbipụta na PPT2DVD Pro, pụtara na m nwere ike ịkekọrịta n'ihu m \_ sitụrụla sweated n'elu na ahịa bụ ndị ọzọ yiri ka agafe ha na ndị ọzọ na-amụba-apụghị iru nke azụmahịa m.
- R. Christianson
Easy na Ike
Were dịkarịa ala oge ego iji tọghata PowerPoint ka DVD ma ọ bụ video.
Chebe niile PowerPoint ọcha, dị ka Akara ókwú, slide ikwu n'ụzọ, timings, ihe eserese, ụda na narrations.
Nkwado 100+ video formats dị ka AVI, WMV, MOV, Flv, MPEG, wdg maka nkekọrịta on YouTube, weebụsaịtị na blọọgụ.
Ọ dịghị hassle iji tọghata PowerPoint n'ihu na na na obere ngwaọrụ dị ka iPod, iPhone, n'akpa uwe PC, wdg
Enye akpaaka-play mode na-enweghị ịkwụsịtụ ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka play mode na ime akara.
Ọkụ ruo 12 PowerPoint faịlụ ka DVD otu mgbe.
Get More si PowerPoint n'ihu
Ọkụ PowerPoint ngosi nke ụlọ ọrụ profaịlụ ma ọ bụ ngwaahịa broshuọ ka DVD fim maka azụmahịa ngosi.
Play na-ụlọ mgbasa ozi video on TV meziri ofụri ngosi Ụlọ Nzukọ ma ọ bụ na obodo n'obere ụlọ ahịa.
Mepụta DVD ngosi mmịfe na menu maka mkpa ihe, ezinụlọ reunions, anniversaries, na na.
Bulite video ka online video nkekọrịta saịtị dị ka YouTube na Hulu maka mbọn.
Anya-akụta DVD menus
45+ ọma e DVD menu ndebiri maka ngwa playback na navigation kpọmkwem ngosi.
Na-agụnye ọ bụla oge na omume, dị ka azụmahịa, agụmakwụkwọ, ezumike, ezumike, ọdịdị, chọọchị, wdg
Mfe ịgbanwe menu etiti ịke na-egwu button ịke.
Tinye n'okirikiri maka ngosi DVD menu.
Tinye na-akparaghị ókè menu odide na-eme ka ngosi ọzọ akọwa.
Logo na Trademark
Tinye logo ma ọ bụ ụghalaahịa ka n'ihu iji kwalite gị ika ụlọ ahụ ma na-echebe gị nwebisiinka.
Tinye akaghị ndabere ụda (ma ọ bụ adịghị) ma ọ bụ nanị gbanyụọ niile mbụ ngosi ụda.
Họrọ 16: 9 akụkụ ruru nhọrọ isure widescreen n'ihu ka DVD maka egwu na TV.
Gịnị mere bụ kere DVD egosipụta dị ka ihuenyo zuru?
Olee otú m weghachite ndebanye koodu?
Olee otú ele PowerPoint ngosi mmịfe on DVD Player
Tọghata PowerPoint ka video, na-echebekwa niile atụmatụ nke mbụ PPT na-adị mfe ịkọrọ ya niile na weebụ ma ọ bụ site obere ngwaọrụ. Mụtakwuo